ऋणको बोझले त्रिशूलीमा, के भन्छन् प्रत्यक्षदर्शी ? « Naya Page
प्रकाशित मिति : 18 January, 2020 6:52 am
काठमाडौं, ४ माघ । काठमाडौं चन्द्रागिरी–४ थानकोटमा २० वर्षदेखि बस्दै आएका ३५ वर्षीय विनय लामिछाने केही दिनदेखि तनावमा थिए । स्थायी घर मकवानपुर चित्लाङ भएका विनयले शिक्षण पेसा छाडेर अनलाइनमार्फत व्यापार गर्दै आएका थिए ।
त्यसबाट नाफा नभएपछि ऋण थपियो । ऋणको बोझ थेग्न नसकेपछि उनले बिहीबार गलत बाटो रोजे। त्यही घटनामा उनले पत्नी जमुनालाई गुमाएनन् मात्रै, दुई नाबालक छोरा ६ र २२ महिनाका नदीमा बेपत्ता भए ।
धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–४ बाँदरे घुम्ती नजिकै विनय र उनकी पत्नी जमुनाले एक–एक छोरा च्यापेर त्रिशूलीमा हामफालेका थिए । त्यसलगत्तै स्थानीय रिसोर्ट र होटल सञ्चालकले विनयलाई जीवितै उद्धार गरे। जमुना मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् ।
अन्दाजी २ सय मिटर तलसम्म बगेका दुवै बच्चा शुक्रबारसम्म पनि भेटिएका छैनन् । प्रहरीले शुक्रबार बिहानदेखि खोजी गरेको थियो। बिहीबार साँझदेखि वर्षा भइरहेको र नदी धमिलो रहेकाले उनीहरूको खोजीमा कठिनाइ भएको इलाका प्रहरी गजुरीले जनाएको छ ।
लामिछाने दम्पतीको सानो छोरोको पास्नी शुक्रबारका लागि तय भएको थियो । चन्द्रागिरीस्थित घरमा सुतक परेको र शुक्रबारै उत्तम साइत रहेकाले जमुनाको माइतबाट पास्नी गर्ने तयारीका साथ उनीहरू बिहीबार धादिङ हिँडेका थिए । तर, आदमघाट बजार झर्नुपर्नेमा पौने घण्टाको दूरीमा रहेको बेनीघाटस्थित बाँदरे घुम्ती पुगेका थिए ।
‘उनीहरू यहाँ आदमघाटमा नझरी सिधै उता पुगेछन्’, जमुनाका दाइ जगत रेग्मीले भने, ‘भान्जाको भात खुवाइको तयारीमा उनीहरूलाई पर्खिरहेका थियौं । अचानक दुःखको खबर सुन्नुप¥यो ।’
नदी किनारमा छाडेको झोलामा बच्चालाई भात खुवाइमा लगाउने चाँदीको बाला समेत भेटिएको थियो। घुम्तीमा आइपुगेपछि झोलुंगे पुल तरेर गोरखा घ्याल्चोकबाट उनीहरू त्रिशूलीमा हेलिएका थिए । त्यस अघि घुम्तीको होटलमा घरबाटै बोकेको दूध तताएर बच्चालाई खुवाएपछि उनीहरू गोरखातर्फ लागेको होटल सञ्चालक वदनकुमारी श्रेष्ठले सुनाइन् ।
आत्महत्याको तयारीसाथ उनीहरूले घर छाडेको खुलेको जिल्ला प्रहरी धादिङका प्रमुख रवीन्द्र रेग्मीले बताए । ‘थानकोटस्थित घरमा सिरानीमुनि रहेको सुसाइड नोट प्रहरीले बरामद गरेको छ’, उनले भने, ‘त्यसमा व्यवसाय गर्दा थुप्रै ऋण लागेको र ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेर आत्महत्याको बाटो रोजेको उल्लेख छ ।’
घटनाको अनुसन्धानका लागि विनय गजुरी प्रहरीको हिरासतमा छन् । ‘उनीहरू योजनाबद्ध तरिकाले आत्महत्या गर्न निस्किएका रहेछन्’, जिल्ला प्रहरी प्रमुख रेग्मीले भने, ‘सुरुमा बच्चालाई छाडेरै जाने सल्लाह गरे पनि आफूहरू नरहेपछि बच्चाको बिचल्ली हुने सोचेर उनीहरूसहित आत्महत्याको प्रयास गरेको विनयले प्रहरीलाई बताएका छन् ।’
उनीहरू कसरी आत्महत्या गर्न बाध्य भए र त्यसको पछाडि अरू के–के कारण थिए भनेर अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए ।
विनयले सुरुमा आफू मात्रै आत्महत्या गर्ने योजना पत्नीलाई सुनाएका थिए । जमुनाले ‘सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने कसम खाएको’ भन्दै आफू पनि आत्महत्या गर्ने अडान लिइन् । विनयले ‘दुई अबोध बालकलाई कसले हेर्ने ? तिमी त बाँच्नुपर्छ’ भने पनि जमुनाले मानिनन् । विनयले प्रहरीमा दिएको बयानअनुसार जेठो छोरो आफूले च्यापे भने कान्छो जमुनाले ।
सुसाइड नोटसँगै उनीहरू आफूले ऋण तिर्नुपर्ने व्यक्तिलाई रकमसहितको सूचीका साथै आफ्नो मृत्युपछिको किरिया खर्च समेत छाडेको पाइएको छ । विनयले घरमा रहेका ९६ वर्षीय हजुरबुवालाई सम्बोधन गर्दै माफ गरिदिन पनि लेखेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।
ऋणीहरू पनि अनुसन्धानमा : प्रहरी
पेसाले शिक्षक विनयले साथीसँग मिलेर अनलाइन व्यापारमा लगानी गरेका थिए । सुरुमा नाफा कमाए पनि पछिल्ला वर्षमा थुप्रै घाटा बेहोरे। साथीहरूले पनि छाडेपछि एक्लै व्यवसाय धान्दै आएका उनले पछिल्लो एक वर्षमा डेढ करोडभन्दा बढी ऋण लिएको ऋणीको लिस्टमा उल्लेख रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
‘ऋणबारे हामीलाई थाहा थिएन । तनाव भए पनि त्यस्तो अप्रिय निर्णय लेला भन्ने हामीले सोचेका थिएनौं’, दाजु नाता पर्ने हरिहर लामिछानेले भने, ‘पहिला कलेज पढाउँथ्यो । अहिले कमोडिटी व्यापार गर्दै आएको थियो । एक्कासी सोच्दै नसोचेको घटना भोग्नुपर्‍यो । जे नहुनु थियो त्यो भयो, अब विनयलाई सम्हाल्नु छ ।’
विनयले व्यवसाय गर्दा लागेको ऋण तिर्नै नसकेर आत्महत्याको बाटो रोजेको हुन सक्ने धादिङका प्रहरी प्रमुख रवीन्द्र रेग्मीले बताए । ‘उनले ऋण लिएका व्यक्तिहरू को–को हुन् ? तिनीहरूले कसरी ऋण दिएका थिए ? त्यो पनि हामी अनुसन्धान गर्दै छौं’, उनले भने, ‘बजारमा अहिले मिटरब्याजका कारण पनि यो घटना भएको हल्ला चलेको छ । त्यसैले विनयले बनाएको सूचीलाई हामीले गोप्य राखेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’
जमुनाले पनि जनवरी ४ बेलुकी फेसबुकमार्फत थानकोटमा आएका नयाँ डीएसपीलाई मिटरब्याजमा पैसा लगाउने ऋणीलाई कारबाही गर्न माग गरेकी थिइन् । ‘घटना भएको छ तर मिटरब्याजीकै दबाब हो भन्न सकिने अवस्था छैन’, रेग्मीले भने, ‘अनुसन्धान गर्दै जाँदा मिटरब्याजकै कारण यो घटना भएको रहेछ भने ऋण दिनेहरूलाई पनि हामी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछौं ।’
विनयले अनलाइनमार्फत व्यापार–व्यवसाय गर्ने गरेको तर यति धेरै ऋण गरेको र घाटा लागेको भन्ने आफूले थाहा नपाएको छिमेकी श्रीराम लामिछानेले सुना ए। बेपत्ता भएका दुई नाबालकको खोजीका लागि बेनीघाट आए श्रीरामले भने, ‘मिटरब्याजको कुरा त केही थाहा पाएका छैनौं तर ऋण लागेको भने रहेछ ।’
गल्छी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष् ासमेत रहेका जमुनाका दाजु कपिलप्रसाद रेग्मीले बहिनीसँग एक साताअघि फोनमा कुरा गरेको सुना ए। ‘अनलाइनको फारम भर्नुपर्छ भनेकी थिइन् । मैले पछि गरौंला भनेको थिएँ’, उनले भने, ‘बिहीबार त्यस्तो घटना सुन्नुपर्‍यो ।’
पत्नीलाई समातेर बगिरहेका थिए विनय : उद्धारकर्मी राजेन्द्र श्रेष्ठ
म आफू काम गर्ने रिसोर्टमा त्रिशूलीको साइडतर्फ बसिरहेको थिएँ । एक्कासी झोलुंगे पुलमा केही मान्छे ‘मान्छे बगायो, मान्छे बगायो’ भनेर चिच्याइरहेको सुनें । म कायक चालक भएकाले हत्तपत्त कायक लिएर नदीमा पसिहालें । केही तल मान्छे बगाएको देखेपछि कायकलाई त्यतै लगें ।
केटा मान्छे होसमै थियो । केटी मान्छेको खुट्टा समाउँदै सँगै बग्दै रहेछन् । मैले मेरो कायकमा समाउन लगाएँ । केटी मान्छेलाई आफैं समातेर पाखामा ल्याएँ । उनीहरूलाई बाहिर ल्याउँदा केटी मान्छे बेहोस थिइन् । सायद उनको मृत्यु भइसकेको थियो ।
उनीहरूलाई पाखा ल्याएपछि मात्रै दुई बच्चा पनि थियो भन्ने थाहा पाएँ । मैले नदीमा भने देखिनँ । पुलमा बस्नेहरूले बच्चा पनि बगेको देखेका रहेछन् । अलिक तलसम्म त पुगेर खोजी गर्‍यौं तर बच्चा फेला पार्न सकिएन । अन्नपूर्ण पोष्टबाट